Goobaha Iimaylka ee Rackspace: Waxa ay yihiin iyo sida loo isticmaalo | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/Goobaha iimaylka ee Rackspace: waxa ay yihiin iyo sida loo isticmaalo
Goobaha iimaylka ee Rackspace: waxa ay yihiin iyo sida loo isticmaalo
Martigelinta iimaylka ee Rackspace waxay kaa caawinaysaa inaad abuurto ciwaanka iimaylka gaarka ah (tusaale you@yoursite.com). Adigoo isticmaalaya goobaha emaylka ee saxda ah ee Rackspace, waxaad ku habeyn kartaa macmiilkaaga imaylkaaga ama degelkaaga.
Iyadoo Rackspace's website-ka alaabada martigelinaya ay isticmaalaan hab farsamo sare leh oo IaaS ah, imaylkeeda martigelinta waa mid la awoodi karo oo sahlan in la dejiyo. Taasi waxay ka dhigaysaa doorasho weyn oo lagu lammaaniyo Behmaster haddii aad rabto in aad samaysato ciwaanka iimaylka gaarka ah oo uu la socdo kaaga Behmaster-martigeliyay goobta WordPress.
Waxaan ku wadaagi doonaa dhammaan goobaha muhiimka ah ee Rackspace ee IMAP, POP, iyo SMTP boostadan. Markaa waxaan ku tusi doonaa talaabo talaabo sida loo habeeyo afar macmiil oo caan ah iimaylka si ay u isticmaalaan iimaylka Rackspace: Outlook, Thunderbird, Windows Mail, iyo IOS Mail. Waxaan sidoo kale ku tusin doonaa sida loo habeeyo boggaaga WordPress si aad ugu dirto iimaylo macaamil ganacsi ah adoo isticmaalaya server-ka Rackspace SMTP.
Aynu soo galno!
Waa maxay Settings emaylka Rackspace?
Waa kuwan saddexda emaylka ee ugu muhiimsan ee Rackspace ee aad u baahan tahay si aad u habayso macmiilkaaga iimaylka ama degelkaaga:
Halkan waxaa ah tafaasiisha aad u baahan doonto mid kasta.
Martigelinta iimaylka ee Rackspace waxay kaa caawinaysaa inaad abuurto ciwaanka iimaylka gaarka ah 📧 hagahan ayaa kaa caawin doona inaad si sax ah u habaysoRiix halkan Tweet
Dejinta IMAP ee Rackspace
IMAP waxay kuu ogolaanaysaa inaad habayso macmiilkaaga iimaylka si aad uga hesho boostada soo socota akoonkaaga iimaylka ee Rackspace. Waxay u ogolaataa isku xidhka laba-geesoodka ah, taas oo aad u fiican haddii aad ka hubin doonto iimaylka qalabyo badan.
Waa kuwan dejinta IMAP ee Rackspace:
Waxaa loo baahan yahay SSL: Haa
usernameCiwaanka emailkaaga oo buuxa
Password: Isla eraygaaga sirta ah ee aad isticmaasho si aad u gasho Rackspace webmail
Goobaha POP ee Rackspace
POP waa hab-maamuus kale oo kuu ogolaanaya inaad hesho boostada soo socota.
Waxaad isticmaali kartaa POP haddii aad kaliya qorshaynayso inaad ka gasho iimaylkaaga hal qalab, laakiin kuma habboona in lagu isticmaalo aalado badan sababtoo ah ma taageerto isku xidhka laba-geesoodka ah sida IMAP. Sababtan awgeed, Rackspace waxay ku talinaysaa inaad isticmaasho IMAP mar kasta oo ay suurtagal tahay.
Halkan waxaa ah dejinta POP ee Rackspace:
Wuxuu u baahan yahay SSL: Haa
Dejinta Rackspace SMTP
Halka IMAP iyo POP ay kaa caawinayaan inaad hesho boostada soo socota, SMTP waa hab-maamuus ka shaqeeya dirida iimaylada ee Rackspace. Waxaad u isticmaali kartaa inaad ku habayso macmiilkaaga iimaylka si aad awood ugu yeelato inaad iimaylka ugu soo dirto isla markaaba macmiilkaas. Iyo haddii aad leedahay barta WordPress, waxaad sidoo kale u habeyn kartaa goobta si aad ugu dirto iimaylkeeda adoo isticmaalaya Rackspace SMTP si loo horumariyo gaarsiinta.
Waa kuwan dejinta SMTP ee Rackspace:
Sida Loogu Habeeyay Iimaylkaaga Macmiilkaaga Iimayl Rackspace
Hadda, aan eegno sida aad u isticmaali karto goobaha Rackspace ee kor ku xusan si aad u habayso macaamiisha emailka ee kala duwan. Sidii hore loo sheegay, waxaanu dabooli doonaa afartan macmiil ee caanka ah ee iimaylka ah:
Daaqadaha (macmiilka caadiga ah)
IOS (macmiilka caadiga ah)
Waxa ugu fiican ee ku saabsan badi macaamiishan ayaa ah inaadan u baahnayn inaad geliso faahfaahinta IMAP iyo SMTP si aad gacanta ugu isticmaasho. Midda ka reeban waa barnaamijka IOS Mail app, kaas oo u baahan doona inaad adigu bixiso faahfaahintaas.
Si aad u habayso Outlook si aad u isticmaasho Rackspace, ku bilow adiga oo furaya macmiilka iimaylka Outlook.
Haddii tani ay tahay markii ugu horeysay ee aad furto Outlook, waxaa marka hore lagugu soo jeedin doonaa inaad gasho cinwaanka iimaylka ee Rackspace:
Geli ciwaanka iimaylka ee Outlook
Shaashadda xigta, xulo IMAP:
Dooro ikhtiyaarka IMAP
Kadibna, geli erayga sirta ah ee aad isticmaasho si aad u gasho Rackspace webmailkaaga:
Geli erayga sirta ah ee koontadaada iimaylka Rackspace.
Waa inaad aragto fariinta guusha Guji Dhammaad si aad u sii socoto interface interface:
Fariinta guusha ee Outlook.
Hadda, waa inaad diri kartaa oo aad heli kartaa iimaylo adoo isticmaalaya Outlook.
Markaad furto Thunderbird, waa in laguu sheego inaad dejiso cinwaankaaga iimaylka ee jira. Geli ciwaanka iimaylka ee Rackspace iyo erayga sirta ah ee aad isticmaasho si aad u gasho Rackspace webmail:
Geli ciwaanka iimaylka ee Rackspace iyo eraygaaga sirta ah.
Thunderbird waa inay si toos ah u ogaataa borotokoolka saxda ah - guji Dhammaad si aad hawsha u dhammayso oo aad u bilowdo diritaanka iyo helitaanka iimaylada:
Thunderbird waxay si toos ah u habaysaa borotokoollada - dhagsii "Done."
Haddii aadan rabin inaad isticmaasho Outlook, waxaad sidoo kale isticmaali kartaa barnaamijka Windows Mail ee caadiga ah si aad u dejiso iimaylka Rackspace.
Si aad u bilowdo, fur Mail app-ka. Hadii ay tani tahay markii ugu horaysay ee aad soo saarto app-ka, waa in lagugu dhiiri galiyaa in aad ku darto akoon isla marka aad furto app-ka. Haddii aysan taasi ahayn, waxaad ku dari kartaa akoon cusub adigoo tagaya Dejinta> Maamul Xisaabaadka> Ku dar Koontada.
Liiska xulashooyinka akoonnada, dooro Koontada kale (POP, IMAP):
Dooro ikhtiyaarka "Akoonka kale."
Shaashada xigta, geli ciwaanka iimaylka ee Rackspace iyo eraygaaga sirta ah:
Waana taas! Waa in aad diri kartaa oo aad heli kartaa iimaylo isla markaaba.
Si aad u habayso qalabkaaga iOS si aad u isticmaasho iimaylka Rackspace, waxaad isticmaali kartaa abka Farta ee caadiga ah.
Haddii tani ay tahay markii ugu horeysay ee aad furto app Mail, waxaa lagu weydiin doonaa inaad ku darto xisaab iimayl. Haddii kale, waad tagi kartaa Settings > Passwords & Accounts > Add Account si gacanta loogu daro akoon cusub oo Boostada
Markaad ku darto akoon, dooro kale:
Dooro ikhtiyaarka "kale" marka aad ku darto akoon
Marka xigta, geli ciwaanka iimaylka ee Rackspace iyo erayga sirta ah ee aad isticmaalayso si aad u gasho webmailka:
Halkaa marka ay marayso, waxaa lagugu soo jeedin doonaa inaad gasho Rackspace IMAP iyo faahfaahinta SMTP (horraan ku taxan maqaalkan). Faahfaahinta waxay la mid noqon doontaa server-yada soo galaya iyo kuwa baxayaba maadaama aan lagaaga baahnayn inaad gacanta ku geliso lambarka dekedda:
Geli faahfaahinta Rackspace IMAP iyo SMTP.
Markaad geliso dhammaan faahfaahinta, abka Boostada ayaa xaqiijin doona. Haddii wax walba ay u muuqdaan kuwo wanaagsan, waxaad isla markiiba bilaabi kartaa dirida iyo helitaanka iimaylka adoo isticmaalaya app Mail.
Xallinta Rackspace Arrimaha Xiriirinta iimaylka
Haddii ay dhibaato kaa haysato helitaanka ama dirida iimaylka, halkan waxaa ah qaar ka mid ah tabaha cilad-raadinta si ay kaaga caawiyaan in wax walba ay shaqeeyaan.
Dhibaatooyinka Helitaanka iimayllada
Haddii ay dhibaato kaa haysato helitaanka iimaylada, waa inaad marka hore isku daydaa inaad si toos ah u gasho Rackspace webmailkaaga.
Haddii aad ku aragto iimaylka webmailka, laakiin aanu ka muuqan macmiilkaaga iimaylka, laba jeer hubi goobaha xidhiidhka.
Hubi inaad gelisay macluumaadka saxda ah - way fududahay inaad khalad yar samayso:
Noocyo: Qoraal kasta oo ku jira magacaaga isticmaale ama eraygaaga sirta ah waxa ay ka dhigayaan xiriir aan macquul ahayn.
Nambarada dekeda: Hubi inaad haysato lambarka dekedda saxda ah ee borotokoolka aad dooratay. SMTP waa 465, IMAP waa 993, POP waa 995.
Dhibaatooyinka Diritaanka iimayllada
Haddii ay dhibaato kaa haysato dirida iimaylka macmiilkaaga iimaylka, halkan waxaa ah talooyin.
Marka hore, isku day inaad gasho akoonkaaga Rackspace webmail oo si toos ah halkaas uga dirto iimaylka. Haddii iimaylka uu shaqeeyo marka aad u dirto webmailka laakiin aanu shaqaynayn marka aad isticmaalayso iimaylka macmiilkaga, settings SMTP ee aad gashay waxa laga yaabaa inaanay sax ahayn.
Haddii aanad iimaylka ka soo diri karin mareegahaaga ama macmiilkaaga iimaylka, iimayladaada waxa laga yaabaa in loo calaamadiyo inay yihiin spam. Hubi inaad raacdo dhammaan hababka ugu wanaagsan ee iimaylka marka aad samaynayso fariimahaaga baxaya si aad taas uga fogaato.
Sida loo habeeyo WordPress si loogu diro iimaylo iyada oo loo marayo Rackspace SMTP
Haddii aad leedahay degel WordPress ah, waxaad sidoo kale isticmaali kartaa server-ka SMTP ee Rackspace si aad u soo dirto emayllada macaamilka ee boggaga WordPress, hagaajinta isku halaynta iyo hagaajinta arrimaha emayllada WordPress ee aan dirin.
Ma u baahan tahay heer-sare, degdeg ah, iyo martigelin aamin ah mareegahaaga ecommerce-ka cusub? Behmaster waxay siisaa adeegayaal xawli badan leh iyo 24/7 taageero heer caalami ah oo ka timaada khubarada WooCommerce. Eeg qorshayaashayada
Iimayl-macaamilku waa iimaylo maalinle-maalin-maalin ah lagama maarmaan ah sida dib-u-dejinta erayga sirta ah, ogeysiisyada gudbinta foomka, iyo wixii la mid ah.
Adeegga SMTP ee Rackspace wuxuu leeyahay 10,000-emayl-maalintii xaddidan, taas oo macnaheedu yahay ilaa aad direyso tiro fariimo ah maalin kasta, uma badna inaad arrimaha la kulanto markaad Rackspace u isticmaalayso macmiilkaaga iimaylka iyo iimaylada boggaga WordPress. .
Si tan loogu rakibo WordPress, macluumaadka kaliya ee aad u baahan tahay waa:
Koontadaada iimaylka ee jirta ee Rackspace (ma u baahnid inaad samaysato akoon cusub ama aad wax ku habayso Rackspace).
Furaha bilaashka ah ee Boostada SMTP wuxuu kuu oggolaanayaa inaad habayso boggaga WordPress si aad ugu dirto iimaylo iyada oo loo marayo Rackspace SMTP.
Aynu si qoto dheer u eegno sida loo dejiyo.
1. Habee Settings SMTP Boostada
Si aad u bilawdo, rakib oo shaqay figta bilaashka ah ee Boostada SMTP ee Yehuda Hassine. Taas ka dib, u tag Ku dhaji SMTP aagga dashboardkaaga WordPress oo guji Muuji Dhammaan Dejinta si aad u gasho aagga dejinta SMTP oo buuxa:
Gelitaanka dhammaan goobaha ku jira Boostada SMTP ee WordPress.
Marka hore, u gudub Message tab oo geli iimaylkaaga Rackspace gudaha Cinwaanka emailka aagga. Waxa kale oo aad geli kartaa magaca aad rabto inaad u isticmaasho iimaylada boggaaga:
Isku hagaaji magacaaga iyo ciwaanka iimaylkaaga "From"
Keydi isbeddelladaada ka dibna fur aagga dejinta buuxda mar labaad.
Markan, waxaad ka shaqayn doontaa Account tab. Marka hore, habbee meelaha hoos u dhaca ee ku jira Transport qaybta sida soo socota:
Nooca BoostadaKu dhaji SMTP
Dooro PostSMTP sida nooca boostada.
Doorashada doorashadan waxay balaadhin doontaa xulashooyin cusub oo hoose - tani waa meesha aad u baahan tahay inaad geliso macluumaadka Rackspace SMTP. U habeyn habaynkan sida soo socota:
Magaca martida ee Server-ka Boostada ee baxaysa: safe.emailsrvr.com
Dekadda Server-ka Boostada ee baxaysa: 465
Baqshad-Ka timid Ciwaanka iimaylkaCiwaanka emailkaaga Rackspace oo buuxa
usernameCiwaanka emailkaaga Rackspace oo buuxa
PasswordRackspace emaylka sirta ah ee aad isticmaasho si aad u gasho Rackspace webmail
Ugu dambeyntii, hubi inaad gujiso Keydso Isbedelada:
Geli goobaha Rackspace SMTP.
2. Dir iimayl tijaabo ah
Hadda waa waqtigii la diri lahaa iimaylka tijaabada si loo hubiyo in wax walba ay si sax ah u shaqeynayaan.
Ku noqo kan ugu muhiimsan Ku dhaji SMTP aagga WordPress oo dooro Soo dir iimayl tijaabo ah:
U diritaanka iimaylka tijaabada ee WordPress.
Ku qor cinwaanka emailkaaga oo guji Next:
Geli iimaylkaga sidii ciwaanka qaataha.
Haddii qaabayntu shaqaynayso, waa inaad aragto fariinta guusha:
Fariinta guusha kadib habaynta iyo tijaabinta Post SMTP kadib.
Waa inaad sidoo kale ku aragtaa iimaylka sanduuqaaga-mailka - waa inuu u muuqdaa inuu ka yimid ciwaanka iimaylka ee Rackspace:
Sida uu u ekaado madaxa iimaylka ee ku jira sanduuqaaga.
Waana taas! Mareegtaada WordPress ayaa hadda soo diri doonta dhammaan iimaylkeeda iyada oo loo marayo akoonkaaga Rackspace.
Haddii ay dhibaato kaa haysato dejinta server-ka Rackspace SMTP, waxaad had iyo jeer isku dayi kartaa server kale oo SMTP ah oo bilaash ah sida Gmail SMTP, SendGrid API, Outlook SMTP, ama Yahoo SMTP.
Raadinta goobaha iimaylka ee Rackspace si aad u habayn karto si loogu isticmaalo iimaylka macmiilkaaga ama degelkaaga? 📧 Wax kale ha eegin 👀Riix halkan Tweet
In kasta oo xalalka daruuraha ee Rackspace aysan ahayn kuwo la heli karo sida Behmaster's for website-ka, waxay bixiyaan email martigelin la awoodi karo, taas oo ka dhigaysa doorasho adag Behmaster Isticmaalayaasha ama qof kasta oo kale oo raadinaya xal martigelinta iimaylka.
Hadda oo aad ogtahay goobaha iimaylka ee Rackspace ee IMAP, POP, iyo SMTP, waxaad u habayn kartaa macmiil kasta oo iimayl ah si uu u soo diro oo u helo iimaylo adoo isticmaalaya koontadaada Rackspace.
Haddii aad leedahay degel WordPress ah, waxaad sidoo kale isticmaali kartaa server-ka Rackspace SMTP si aad u gudbiso iimaylada macaamilka ee goobtaada oo aad u wanaajiso isku halaynta.
Weli ma haysaa wax su'aalo ah oo ku saabsan goobaha iimaylka ee Rackspace ama sida loo isticmaalo? Noogu sheeg qaybta faallooyinka!
Suuqgeynta Saamaynta, Qaybta 7: Ololahaaga Koowaad